Umphathi we-chic wanamhlanje 1 BD @ Atelier - I-Airbnb
Umphathi we-chic wanamhlanje 1 BD @ Atelier
Igumbi lokulala eli-1 elikhethekileyo elifakwe kwi-decor yale mihla. Iza nezixhobo ezigcweleyo kunye nefenitshala entsha kraca. Indawo yokutyela ilula ukuya kwiindawo zokutyela ezisefashonini, ikhefi kunye nemivalo yeKingston Foreshore ephilayo, ukanti ibekwe ngobuchule kwicala elizolileyo le-promenade. Olona khetho lufanelekileyo lokubaleka impelaveki okanye umhambi weshishini olawulayo.
Igumbi lokulala elithandekayo elikwisakhiwo esikhuselekileyo kwindawo yaseKingston foreshore. Iphangalele kakhulu kwizikwere zeemitha ezingama-73, igumbi lokuhlala likumgangatho ophakamileyo livumela umoya omninzi wendalo, kunye nendawo yokuhlala epholileyo.
Ifulethi elinefenitshala ngokupheleleyo kunye nendawo yokuhlala enolonwabo lwasekhaya (i-TV engama-52) kunye ne-intanethi ye-intanethi ye-NBN. Umabonwakude uneChromecast encanyathiselwe ukuze ukwazi ukuphosa imidiya yakho oyithandayo ukusuka kwifowuni/ithebhulethi/ilaptop yakho ukuya kwiTV. Indawo yokuhlala ebanzi kwaye eqaqambileyo enokufikelela kwi-balcony. Isofa inokusongwa ibe yibhedi yesofa.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo nge-microwave, iketile, itoaster, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya, kunye nezixhobo zokupheka ezikumgangatho ophezulu kunye nezitya. Sikwanayo nomatshini weNespresso (imodeli: Vertuo Plus) ukuze ukonwabele ikofu oyithandayo. Iwasha evaliweyo kunye nesomisi nazo zikhona.
Igumbi lokulala linebhedi elingana nokumkanikazi kwaye yakhelwe ngeengubo, enemibono ejonge egadini. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngeetawuli ezikumgangatho ophezulu kunye nezinto eziluncedo zomntu.
Indawo yebalcony ikhuselwe kwaye isayizi yesisa enendawo yokuhlala yangaphandle, ijonge kumagumbi asanda kwakhiwa eSapphire kunye nembono yechibi.
4.94 · Izimvo eziyi-431
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi431
Kanye ngaphaya kweKingston Foreshore ephithizelayo, kukho ukhetho lwe-eclectic lweendawo zokutyela, iikhefi kunye neebhari onokukhetha kuzo, kunye neNdala yeeMarike zeBus Depot yokutya kunye nabathandi bempahla eyenziwe ngesandla.
Kukwakho nokufikelela ngokulula kwibhayisekile kunye neendlela ezibalekayo ezijikeleza iLake Burley Griffin. Indawo yimizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseCanberra, kuNxantathu wePalamente kunye neZiko leSixeko.
Njengoko ngoku ndisebenza phesheya kolwandle, uya kuba nakho ukuqhakamshelana nomama ngomnxeba/umyalezo endibambana naye kuyo nayiphi na imibuzo ekhawulezileyo. Kungenjalo wamkelekile ukuba uqhagamshelane nam ngo-Airbnb kwaye ndiya kuzama ukuphendula ngokukhawuleza kwam. Sobabini sihleli eCanberra ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye sithetha kakuhle isiNgesi nesiVietnamese kwaye siya kuzama ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo kangangoko kunokwenzeka.
Njengoko ngoku ndisebenza phesheya kolwandle, uya kuba nakho ukuqhakamshelana nomama ngomnxeba/umyalezo endibambana naye kuyo nayiphi na imibuzo ekhawulezileyo. Kungenjalo wamkelek…